अब कोरोनसंगै बाच्न सिक्नुपर्छ | कोरोना कहर | कोरोनाको बेला..
अब कोरोनसंगै बाच्न सिक्नुपर्छ
अमूल्य काजी महर्जन
कोरोनाले हाम्रो सबै कुरा परिवर्तन गरिदिएको छ । पहिला साथीहरूलाई भेट्दा हात मिलाएर अङ्कमाल गर्दै कुराकानी सुरु गरिन्थ्यो । तर अहिले कोरोना महामारी आएसँगै ठुलो होस् या सानो, मित्र होस् या आफन्तजन सबैलाई नमस्कार बाट कुरा सुरु गरिन्छ । अहिले सन्चो बिसन्चो भन्दा पनि कुराको सुरुवात मास्क, स्यानिटाइजर अनि कोरोना अपडेटबाट धेरै हुने गरेको छ ।
म एम. आर. (चिकित्सा बजार प्रतिनिधि)को रूपमा काम गर्ने गर्दछु। मेरो पेसा नै बजार डुल्नु हो । मेरो धेरै जसो समय अस्पतालमा बित्छ । अस्पतालमा कहिले डाक्टरलाई त कहिले डाक्टरलाई कुर्दा कुर्दा बिरामीहरूलाई र कहिले बिरामीको आफन्तहरूलाई भेट्थे। बाकी समयमा औषधि पसलहरूमा डुल्दै बजारको जानकारी बटुल्दै दिनहरू बिताइन्थ्यो । सबै कुरा ठिकठाक नै थियो ।
जिन्दगी आफ्नो हिसाबले चलिरहेको थियो तर जिन्दगी न हो आफूले सोचेको जस्तो नहुने रहिछ । कोरोनाले व्यवहारिक र पेसागत दुवै क्षेत्रमा नोक्सानी र डर त्रास ल्याइदिएको छ । पहिला आधारभूत तलबमा बोनस भत्ता पाउने मैले अब त सुख्खा तलब (आधारभूत तलब) मात्रै पाउने भएको छु । अहिले घरबाट कामकोलागी निस्कँदा मैले कतै कोरोना भएको मान्छे पो भेट्छु कि जस्तो लाग्दछ । त्यसैले सुरक्षाको सामान मास्क, पन्जा लगाएर अनि स्यानिटाइजर बोकेर निस्कन्छु ।
आजकल अस्पतालमा हतपत छिर्न दिँदैनन्, मौका मिलेर भित्र गरे पनि डाक्टरहरूले भेट्न चाहँदैनन्, औषधि पसलहरूमा गयो टाढैबाट है टाढैबाट सुन्न पर्छ । त्यसमाथि बजार ठप्प छ भन्दै उनीहरू आफ्नो पिडा त सुनाउँछन्। काम सकेर घर फर्कँदा कतै मैले बजार घुम्दा कोरोना बोकेर हजुरबा हजुरआमा, बुबा आमालाई सार्दिन्छु की भन्ने जस्तो डर मनमा आउँछ । बुबा आमाले सुरुमा त मलाई अब अफिस नजा केही दिन भन्नुहुन्थ्यो । तर के गर्नु अर्काको जागिर जानै पर्ने । यसरी नै दिनचर्या बित्दै छ।
चैतमा लकडाउन सँगै बन्द भएको मेरो काम जेठको अन्तिम सातातिरबाट बाट बल्ल सुरु भएको हो । अहिले कोरोना सङ्क्रमणको सङ्ख्या दिनानुदिन दिन बढ्दै गइरहेको छ। जसले गर्दा दिनकै बजार घुम्दै हिँड्ने म जस्तोको कामलाई पुरै प्रभावित गरेको छ ।
कतै म कोरोना भएको कसैको सम्पर्कमा आएर मैले अरूलाई सार्छु भन्ने कुरालाई लिएर लकडाउन खुकुलो भएयता म पहिलाको भन्दा बढी नै त्रसित छु। हुन त आफूले सुजे बुझेको सतर्कता अपनाएको छु। यो कोरोनाले म जस्तो दिनकै बजार घुम्दै हिड्नुपर्नेहरुको कामलाई पुरै प्रभावित गरेको छ । यसले गर्दा मैले गर्दा मैले धेरै कुराहरू गुमाए । मेरो पेसामा पब्लिक रिलेसन बढाउनु एकदमै जरुरी हुन्छ । नयाँ मानिसहरूलाई भेटेर कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्छ तर अहिलेको समयमा मान्छेहरू भेट्नबाट वञ्चित भए । पहिला जस्तो मान्छे भेट्न सजिलो हुँदैन र भेट्न चाहँदैनन् । मैले आफूले गर्न तयार पारेको योजनाहरू गर्न नपाएकोमा धेरै दुखी छु ।
अब जे जस्तो भए पनि समय अनुसार चल्नुपर्ने छ । यो कोरोनाले मलाई आर्थिक व्यवस्थापनको केही सिकायो दियो । आफूसँग भएको पैसा को सदुपयोग गर्ने बारे ज्ञान दियो । अब यो कोरोनासँग कतिन्जेल डराउने अब सतर्क भएर यो सँगै बाच्न सिक्नुपर्छ ।
५ श्रावण २०७७, सोमबार १६:३०